Tim Cook anobvuma kuti iyo iPhone inodhura zvakanyanya | IPhone nhau
Tim Cook anobvuma kuti iyo iPhone inodhura
Kutenga Apple zvishandiso kazhinji chisarudzo chakaoma uye chemari chakakomba. Nekudaro, zvishandiso zvakaita seMacBook zvinowanzoita zvine musoro kana zvasvika pakutenga nekuda kwekubatsira kwatinovapa. Asi ndiyo iyo iPhone iyo inowanzo tarisa yakawanda yezvichemo kana zvasvika pamitengo. Kunyange chiri chokwadi kuti iyo iPhone SE yaive shanduko, ichive iri yakachipa iPhone kusvika parinhasi, tinoziva kuti edzidzo dzazvino dzehama dzakura kazhinji dzinodhura kupfuura iyo makwikwi. Tim Cook anozviziva, uye kunyange iye abvuma kuti iyo iPhone inodhura zvakanyanya Airevei nazvo?
Zvichida neizvi isu taida kudonhedza kuti inotevera iPhone ichave chinhu chakachipa kupfuura zvakajairwa, kana kwete. Munguva yerwendo rwake kuenda kuIndia, Tim Cook akapa bvunzurudzo paterevhizheni yenyika, kunyanya kuti azvionekwe zvishoma uye ataure nezvekufarira kuri kuita Apple munyika. Paunobvunzwa nezve mutengo weiyo iPhone uye kuti unodhura zvakadii, uchifunga kuti akawanda mashandiro haatomboshanda munyika shoma (Apple News, Apple Bhadha ...), Tim Cook aizeza kutaura kuti iyo iPhone inodhura kwazvo chigadzirwa.
"Tinoziva kuti mutengo weiyo iPhone unodhura", haana kupotsa mukana wekuti zvakare mitero inovamanikidza kutengesa zvigadzirwa zvavo zvakadhura kunze kunze kweUnited States of America, kunyangwe ini ndisingafunge kuti ndicho chikonzero . Paakangobvunzwa nezvekugadzira iyo "yakachipa" iPhone, Tim Cook akataura nezvekuti hunhu hwemhando yeApple hautenderi, nekuti havatombodzikiswa, asi kuwedzerwa. Pachine zvinyengeri vanorota nezve yakachipa-inodhura iPhone, chimwe chinhu chatisingatendi kuti chichaitika, zvirinani munguva pfupi kana yepakati.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » Noticias » Tim Cook anobvuma kuti iyo iPhone inodhura
Ndinoda kuti iwe upe hukuru zvinopa nguva nenguva pane maMacs andiri kuda kutenga asi ini ndinoona kuti anodhura kwazvo.
chii chisina maturo, inodhura kune avo vasingakwanise kuitenga